gPodder: A simple media aggregator uye podcast mutengi weLinux | Kubva kuLinux
gPodder: A simple media aggregator uye podcast mutengi weLinux
Linux Tumira Kuisa | | Applications, Dzidziso / Mabhuku / Matipi
Sezvo, mazuva ano zvine fashoni kwazvo kushandisa iyo Podcasts, kwete chete kune munda we kufambisa, kudzidza uye kudzidzisa kubva mundima ye Yemahara Software, Vhura Sosi uye GNU / Linux, asi kune ese marudzi ehukuru, zvemukati uye chinangwa, nhasi tichataura nezvazvo «gPodder ».
«gPodder » idiki, asi inobatsira kwazvo software chishandiso chakagadzirwa mukati Python ine GTK +, iyo inoshanda seyakareruka media aggregator uye podcast mutengi yeLinux, ndiko kuti, inotibvumidza dhawunirodha uye teerera kune akawanda podcast chiteshi nenzira yakapusa uye inokurumidza.
Goodvibes: Yakanakisa kunyorera yekuteerera odhiyo kubva paInternet
Ndisati ndatanga kutsanangura «gPodder »Semazuva ese, tinokukurudzira mushure mekuverenga bhuku iri, shanyira chinyorwa chedu chekare chine chekuita nemusoro wemashandisirwo anobatsira kuteerera Podcast paLinux, iri nezve Manyuku nyuku», iyo yatinotsanangura munguva yakafanira seinotevera:
"Goodvibes isingaremerwi Internet radio player yeGNU / Linux. Mariri iwe unogona kusecha ako aunofarira nhepfenyuro nekungoaisa, ndizvo chete. Iko kunyorera hakuna basa rekutsvaga maredhiyo, iwe uchafanirwa kuisa iyo URL yeiyo odhiyo rukova pachako. Hazvisi nyore kushandisa, ndinoziva, asi kuita zvirinani pane izvo hazvisi nyore".
Nekudaro, kunyangwe iri application yekuteerera Internet maredhiyo, ne hunyengeri zvinotsanangurwa mune zvakatumirwa posvo, tinogona kuteerera pamhepo kune dzimwe nzira dze Podcast.
1 gPodder: Media aggregator uye podcast mutengi
1.1 Inobatsira ruzivo nezve gPodder
1.2 Chii chitsva mushanduro 3.10.17
1.3 Kuisirwa uye Screenshots
gPodder: Media aggregator uye podcast mutengi
Inobatsira ruzivo nezve gPodder
Zvinoenderana neyako zviri pamutemo webhusaitiparizvino «gPodder » anoenda kwake mhando 3.10.17. Izvi uye neshanduro dzayo dzekare dzinogona kuongororwa nekutarisa pane zvinotevera link. Kazhinji kutaura, iri Linux Desktop Mutengi izvo zvinotibvumidza isu kubata (kurodha pasi uye teerera) kune edu anodikanwa podcast chiteshi kuburikidza neyakareruka interface, asi izere nezvinhu, sekuwedzera / kugadzirisa / kudzima / kutsvaga uye / kana kuendesa kunze / kutumira kunze podcast. Iyo zvakare ine inoshamisa kusangana pamwe nemawebhusaiti «Soundcloud (soundcloud.com)» y «GPodder (gpodder.net)».
Chii chitsva mushanduro 3.10.17
Izvo zvakawanda zvitsva maficha (gadziriso uye zvinowedzeredzwa) zvinosanganisirwa mune ino yazvino yakagadzikana kuburitswa inosanganisira zvinotevera:
YouTube-DL basa reset.
Kugadziriswa mune yekukanganisa yekukanganisa kweanobva masanganiswa (mafidha), izvo izvo zvino zvinongoburitsa ziviso imwechete. Izvo zvinogona kuonwa neyeyambiro icon padhuze nemusoro wavo.
Mitauro yakawanda inotsigira matsva eChina, Russian, Brazilian Portuguese, German, pakati pevamwe. Iyo interface haina kunyatso kududzirwa kune mutauro wechiSpanish, asi kune hukuru hukuru.
Inowanikwa yeLinux, MacOS, uye Windows.
Kuisirwa uye Screenshots
Mune yangu nyaya yangu, ini ndakaisa gPodder uchishandisa flat hub, nezvangu MX Linux Yemunhu Anopindura (MilagrOS), iyo iwe yaunongoda chete kuti uite murairo unotevera:
«sudo flatpak install flathub org.gpodder.gpodder»
Kuti umhanye uye ushandise kuburikidza Zvirongwa Menyu. Inotaridzika sezvakaratidzwa mumifananidzo pazasi:
chitsamba: Pachangu, kubva «gPodder » Ndakafarira simba chairo wedzera iyo URL yeYouTube Chiteshi uye kukwanisa kurodhaunira pasina dambudziko. Uye zvakare, iyo inotibvumidza isu kuwana nyore iyo URL yevanopa zvavo, kuti tivaise ivo mukati, semuenzaniso, iwo maficha ewebhusaiti. Uye ini ndaisada, iyo isingounze mafaira ekumisikidza «.deb, .rpm o .AppImage», kunyange ichiwedzera kuwedzera kuwanikwa kweiyo LaunchPad. Imwe nzira yepamusoro ingangove Podgrab.
Tinovimba izvi "inobatsira shoma posvo" about «gPodder», iri diki, asi inobatsira software chishandiso chakagadzirwa muPython neGTK +, iyo inoshanda senge yakapusa media aggregator uye podcast mutengi yeLinux; ndeyekufarira kukuru uye kushandiswa, kweiyo yese «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» uye yemupiro mukuru mukupararira kweinoshamisa, hombe uye kukura ecosystem yezvishandiso zve «GNU/Linux».
Parizvino, kana iwe waifarira izvi publicación, Usamire igovera nevamwe. teregiramu, Chiratidzo, Mastodon kana imwe ye Fediverse, ndoda. Uye yeuka kushanyira peji redu repamba pa «KubvaLinux» kuti uongorore dzimwe nhau, pamwe nekujoinha chiteshi chedu chepamutemo che Teregiramu kubva kuDesdeLinux. Nepo, kuti uwane rumwe ruzivo, iwe unogona kushanyira chero Raibhurari yepaindaneti Chemhondoro OpenLibra y jedit, kuwana uye kuverenga mabhuku edhijitari (maPDF) panhau iyi kana mamwe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Applications » gPodder: A simple media aggregator uye podcast mutengi weLinux
Iyo Raspberry Pi Foundation yakavanda muchivande Microsoft repository
Kobalos, malware inobira humbowo hweSSH paLinux, BSD neSolaris